“ကော့သောင်းမြို့ - သူဌေးကျွန်း – Cocks Comb Island ?/ကြက်မောက်ကျွန်း /အသဲပုံကျွန်း” ( ၃ ညအိပ်/ ၄ ရက်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Travel » “ကော့သောင်းမြို့ - သူဌေးကျွန်း – Cocks Comb Island ?/ကြက်မောက်ကျွန်း /အသဲပုံကျွန်း” ( ၃ ညအိပ်/ ၄ ရက်)	10
Posted by သျှားသက်မာန် on Jan 14, 2016 in Travel | 10 comments
တစ်ဦးလျှင် ဒေါ်လာ – မြန်မာနိုင်ငံသား $550 နိုင်ငံခြားသား $ 630 “အသဲပုံကျွန်း/ကြက်မောက်ကျွန်း””The Emerald Heart Island of Myanmar”ဟုခေါ်တင်စားခေါ်ဝေါ်သော
ရန်ကုန် – ကော့သောင်း – ရန်ကုန် အသွားအပြန် လေယာဉ်လက်မှတ်များ၊✈
ကော့သောင်း – သူဌေးကျွန်း -ရနောင်း – ကော့သောင်း Boat များ၊ ကော့သောင်း CITY TOURS ကားများ၊ ?
5 stars အဆင့်ရှိ အဆင့်မြင့် ဟိုတယ်တွင်(၂)ည တည်းခိုခြင်း၊ ကော့သောင်း GARDEN HOTEL တွင် (၁)ည တည်းခိုခြင်း။?
“ဘီလူးကြီး”ogre says: တဂျီး……
ကြော်ညာ ခတောင်းလေဗျာ….ညံစ်ပါ့
အောင် မိုးသူ says: ဒေါ်လာ 550 မများဘူးလား
alinsett says: .မင်းသား မင်းသမီး ငှားပြီး..ကြော်ငြာရမှာ…
ရွာထဲမှာ ကြော်ငြာမယ်ဆို..ရွာထဲက မင်းသား မင်းသမီးတွေကို ငှား…
သူကြီးကိုလည်း..ကြော်ငြာခ ပေး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: သားကိုရွေး သားကိုရွေး
sorrow says: ..ဘယ့်နှယ့် သူ့ဆီကကြော်ငြာခတောင်းရသတုန်း …..သူ့သူဌေးခိုင်းတာဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့….လိပ်စာရောဖုန်းနံပါတ်ရော သိနေမှပဲ …ဘောက်ချာပဲပို့ပလိုက်ပေါ့ …အဟိဟိဟိ… ဘယ်လောက်တော့ဖြင့်ကျပါတယ်ဆိုပြီး ….သျား…အားမငယ်နဲ့ …ဦးကသာမီးပိုက်ဆံစိုက်ရမစိုးလို့ပြောပေးတာ…အဟီးဟီး
kai says: စိုက်ချင်လက်စရှိရင်.. ဦးပဲ.. သာမီးကိုယ်စား.. ဘီလ်ကိုစိုက်ပေးလိုက်ပါလားဟင်င်…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1081
sorrow says: …ဒီတဂျီးကတော့လား …
CharTooLan says: ဟိုကအထီးဂျီးစို နားကားအုန်းမယ် ခိခိ :P
ဦးကြောင်ကြီး says: သျှားသက်မာန် နားရက်မှန် ထွားလာဘ်သန် ကျားဝှက်ညဏ်